သူငယ်ချင်းတော်တော်များများကဆရာဝန်ကိုမေးတယ်၊ ဆေးဆရာဝန်ကဘာလို့အီလက်ထရောနစ် sphygmomanometer ကိုသုံးတာကိုကြိုက်သလဲ၊ ဒါပေမယ့်လူနာကိုအီလက်ထရောနစ် sphygmomanometer နဲ့အိမ်ပြန်ခိုင်းတယ်။
တကယ်တော့ဒါကငါတို့ရဲ့နားလည်မှုလွဲခြင်းပဲ၊ ဒီစည်းမျဉ်းမရှိဘူး၊ လက်ရှိအီလက်ထရွန်နစ် sphygmomanometer နှင့်ပြဒါး sphygmomometer သည်ဘုံအဆင့်တွင်ရှိသည်။ လူနာများကပြဒါး sphygmomanometer ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဆိုပါကဆရာဝန်ကအသုံးပြုသင့်သည်၊ မာကျူရီ sphygmomanometer ကိုသုံးနိုင်သည်။
၂၀၂၀ တွင်မာကျူရီအခမဲ့ဆေးကုသမှုကိုရရှိမည်ဖြစ်ပြီးဆေးရုံများမှပြဒါးဆိုင်းဂရမ်မီတာကိုတဖြည်းဖြည်းရုပ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခု၎င်းသည်ကြားဖြတ်အဆင့်မျှသာဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဆေးရုံတွေမှာဆိုရင်တစ်ခါတစ်ရံမှာပြဒါး sphygmomanometer သုံးတာ၊ တစ်ခါတစ်ရံအီလက်ထရောနစ် sphygmomanometer သုံးတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။
စျေးဝယ်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်း၊ ပြproblemsနာအချို့ရှိခြင်း၊ တိုင်းတာမှုသည်တိကျခြင်းမရှိ၊ မှားယွင်းစေသည်၊ လူတိုင်းအတွက်ရှုပ်ထွေးမှုများစွာဖြစ်စေရန်လူအများစိတ်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သောကြောင့်၊ များစွာသောသူငယ်ချင်းများသည်အီလက်ထရောနစ်သွေးပေါင်ချိန်တည်ရှိမှုကိုမိတ်ဆွေများစွာကမလွှဲမရှောင်သာပြုလုပ်နိုင်သည်။ အီလက်ထရောနစ်သွေးဖိအားမော်နီတာ၌တည်၏။
တကယ်တော့ငါတို့မိသားစုတွေသုံးတဲ့အီလက်ထရောနစ်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းကိုတိကျမှန်ကန်စေသည်။ အားလုံးသည် FDA, CE, ISO13485, Roahs စသည်တို့ကိုလက်မှတ်ရရှိထားသည်။
1. ထိခိုက်မှုကိုလျှော့ချ, မာကျူရီမရှိပါ။
2, ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေး, သင်ယူဖို့လွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး လည်းလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။
4, ပြဒါးသည် spurgmomanometer နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုတိကျသည်။
5. အီလက်ထရောနစ် sphygmomanometer သည် oscillographic နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ သွေးကြောနံရံတွင်သွေးစီးဆင်းမှုတုန်ခါမှုကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာသည်။
၁။ သင်တိုင်းတာရန်အလျင်စလိုမဟုတ်ပါက ၁၅ မိနစ်ခန့်အနားယူပါ။ သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာသည့်အခါနောက်ကျောနောက်ဖက်ရှိတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောနေရာတွင်ထိုင်ပါ။
၂။ အထက်လက်လက်လက်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးလေအိတ်ကိုလက်မောင်းနှင့်တွဲပါ။ တံဆိပ်သည် brachial artery ကိုရည်ညွှန်းသင့်သည်။ အိတ်၏အောက်စွန်းသည်တံတောင်ဆစ်အထက်မှ ၂ ~ ၃ စင်တီမီတာရှိသင့်သည်။
၃။ အထက်လက်မောင်းသည်နှလုံးနှင့်တူညီသည်။ ဆောင်းတွင်း၌တုန်ခါမှုကိုကာကွယ်ရန်နွေးထွေးစွာထားပါ။
၄။ အလိုအလျောက်ဖိအားတိုင်းတာသည့်အချိန်တွင်လူနာသည်မည်သည့်အရေးယူမှုမှမပြုလုပ်နိုင်ပါ၊ သို့မဟုတ်ပါကကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောလှိုင်းအတုကြောင့်ဖိအားတိုင်းတာခြင်းသည်ပျက်သွားလိမ့်မည်။
၅။ တိုင်းတာမှုနှစ်ခုကြားကြားကာလသည် ၃ မိနစ်ထက်ပိုရမည်။ အနေအထားနှင့်အနေအထားသည်ဖြစ်နိုင်သမျှအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဖြစ်သင့်သည်။
inquriy အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, ကျနော်တို့က 24 နာရီအတွင်းသငျသညျ reply မည်!
ကုမ္ပဏီ: ဟန်ကျိုး Sejoy အီလက်ထရောနစ် & ။ တူရိယာ Co. , Ltd မှ
နေရပ်လိပ်စာ: No.365, Wuzhou လမ်း, Yuhang စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်, 311100, ဟန်ကျိုး, တရုတ်
E-mail ကို: info@sejoy.com